“မျိုးဆက်သစ် လူငယ်လေးတွေ မမှားဖို့ ငယ်ဘဝမှာ မှားယွင်းခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်အမှားများကို ပြောပြလာတဲ့ ကျော်သူ” - Cele Connections
“မျိုးဆက်သစ် လူငယ်လေးတွေ မမှားဖို့ ငယ်ဘဝမှာ မှားယွင်းခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်အမှားများကို ပြောပြလာတဲ့ ကျော်သူ”
ရုပ်ရှင် မင်းသားကြီး ကျော်သူကိုတော့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးလည်း ချစ်ခင် ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်နော် ..။ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်နဲ့ အားပေးမှုတွေကို ရရှိထားတဲ့ ကျော်သူကတော့ ငယ်ဘဝရဲ့ သင်ခန်းစာတွေနဲ့ ကိုတိုင် ပြုပြင်ကာ အများအကျိုး သယ်ပိုးတဲ့ အလုပ်တွေကို ဦးဆောင်ကာ လုပ်ဆောင်နေတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်..။ အနုပညာကို ချစ်မြတ်နိုးသူပီပီ ရုပ်ရှင်ကားတွေကို ဆက်လက်ရိုက်ကူးဖြစ်နေပြီး ရိုက်ချက်တွေကောင်းတဲ့ ဒါရိုက်တာအနေနဲ့ နာမည်ကြီးသူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါသေးတယ်..။
ကျော်သူက ဒီနေ့ ဧပြီလ (၂၁)ရက်နေ့မှာ သူ့ဘဝနဲ့ ရင်းပြီး ရခဲ့ တဲ့ သင်ခန်းစာတွေကို “မိုက် တယ်ကွာ…။ ဂေါ် တယ်ကွာ…။ ဟော့ တယ်ကွာ…။ လန်း တယ်ကွာ… လို့ ပြောနေမယ့်အစား ငါ အဲဒီအရွယ်မှာ လူမှုကောင်းကျိုး ဘာတွေများလုပ်ခဲ့လဲ? လက်ရှိ အချိန်မှာကော အများကောင်းကျိုးတွေ လုပ်နေသလား? ဒါကို ပြန်ပြီးသုံးသပ်ပါ။ ငယ်ဘဝ ဆိုတာပြန်မရနိုင်ဘူး။ ငယ်ဘဝ ကထဲက စိတ်မလေဘဲ လူမှုကောင်းကျိုးတွေကို နိုင်သလောက်လုပ်ပေးခဲ့ရင် ကြီးဘဝမှာငြိမ်းချမ်းမှာ အသေအချာပဲ။ ငယ်ဘဝ မှာ “လူငယ်” ဆိုတဲ့ ပညတ်ကို ခုတုံးလုပ်ပြီး ကဲချင်သလိုကဲ၊ ဆိုးချင်သလိုဆိုး၊ မိုက်ချင်သလို မိုက်ခဲ့ကြရင်တော့ ကြီးလာတဲ့အချိန်ရောက်ရင် ကောင်းမှုတွေကို ပြန်အဖတ်ဆယ်ရတာ မောပါ့ကွာ…မောပါ့။ ဒါဟာ….ငါ ပြန်မရနိုင်တော့တဲ့ ငါ့ဘဝနဲ့ရင်းပြီး ခံစားခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်ဟောင်းတွေ၊ လုပ်ရပ်ဟောင်းတွေရဲ့ ပြစ်ချက်၊ဆိုးချက်တွေပါ။
ဒါကို အထူး တိကျ သေချာ လေးနက်စွာ သင်ခန်းစာယူကြပါ လူငယ်အပေါင်းတို့…။ မေတ္တာ စေတနာ အရင်းခံလျက်….သက်ရှည်ကျန်းမာချမ်းသာ သောကကင်းကြပါစေ…. ကျော်သူ ။” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်..။ ကျော်သူက ကိုယ်တိုင် ရရှိခဲ့တဲ့ သင်ခန်းစာတွေကို နောင်လာနောင်သားမျိုးဆက်လေးတွေကိုလည်း မမှားယွင်းရအောင် မျှဝေတင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော် ပရိသတ်ကြီး..။ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးလည်း ငယ်ဘဝရဲ့ သင်ခန်းစာတွေကို ယူကာ ကြီးလာတော့ အများအကျိုးသယ်ပိုးတဲ့လူဖြစ်အောင် နေထိုင်ခဲ့တဲ့ ကျော်သူကို လေးစားအားကျရင် မှတ်ချက်လေးတွေ ရေးပေးခဲ့ကြပါဦးနော်..။
Source: Kyaw Thu’s Facebook
“မြိုးဆကျသဈ လူငယျလေးတှေ မမှားဖို့ ငယျဘဝမှာ မှားယှငျးခဲ့တဲ့ လုပျရပျအမှားမြားကို ပွောပွလာတဲ့ ကြျောသူ”
ရုပျရှငျ မငျးသားကွီး ကြျောသူကိုတော့ Cele Connections ပရိသတျကွီးလညျး ခဈြခငျ ရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျ ထငျပါတယျနျော ..။ ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြနဲ့ အားပေးမှုတှကေို ရရှိထားတဲ့ ကြျောသူကတော့ ငယျဘဝရဲ့ သငျခနျးစာတှနေဲ့ ကိုတိုငျ ပွုပွငျကာ အမြားအကြိုး သယျပိုးတဲ့ အလုပျတှကေို ဦးဆောငျကာ လုပျဆောငျနတေဲ့သူပဲဖွဈပါတယျ..။ အနုပညာကို ခဈြမွတျနိုးသူပီပီ ရုပျရှငျကားတှကေို ဆကျလကျရိုကျကူးဖွဈနပွေီး ရိုကျခကျြတှကေောငျးတဲ့ ဒါရိုကျတာအနနေဲ့ နာမညျကွီးသူတဈဦးလညျး ဖွဈပါသေးတယျ..။
ကြျောသူက ဒီနေ့ ဧပွီလ (၂၁)ရကျနမှေ့ာ သူ့ဘဝနဲ့ ရငျးပွီး ရခဲ့ တဲ့ သငျခနျးစာတှကေို “မိုကျ တယျကှာ…။ ဂျေါ တယျကှာ…။ ဟော့ တယျကှာ…။ လနျး တယျကှာ… လို့ ပွောနမေယျ့အစား ငါ အဲဒီအရှယျမှာ လူမှုကောငျးကြိုး ဘာတှမြေားလုပျခဲ့လဲ? လကျရှိ အခြိနျမှာကော အမြားကောငျးကြိုးတှေ လုပျနသေလား? ဒါကို ပွနျပွီးသုံးသပျပါ။ ငယျဘဝ ဆိုတာပွနျမရနိုငျဘူး။ ငယျဘဝ ကထဲက စိတျမလဘေဲ လူမှုကောငျးကြိုးတှကေို နိုငျသလောကျလုပျပေးခဲ့ရငျ ကွီးဘဝမှာငွိမျးခမျြးမှာ အသအေခြာပဲ။ ငယျဘဝ မှာ “လူငယျ” ဆိုတဲ့ ပညတျကို ခုတုံးလုပျပွီး ကဲခငျြသလိုကဲ၊ ဆိုးခငျြသလိုဆိုး၊ မိုကျခငျြသလို မိုကျခဲ့ကွရငျတော့ ကွီးလာတဲ့အခြိနျရောကျရငျ ကောငျးမှုတှကေို ပွနျအဖတျဆယျရတာ မောပါ့ကှာ…မောပါ့။ ဒါဟာ….ငါ ပွနျမရနိုငျတော့တဲ့ ငါ့ဘဝနဲ့ရငျးပွီး ခံစားခဲ့ရတဲ့ဖွဈရပျဟောငျးတှေ၊ လုပျရပျဟောငျးတှရေဲ့ ပွဈခကျြ၊ဆိုးခကျြတှပေါ။
ဒါကို အထူး တိကြ သခြော လေးနကျစှာ သငျခနျးစာယူကွပါ လူငယျအပေါငျးတို့…။ မတ်ေတာ စတေနာ အရငျးခံလကျြ….သကျရှညျကနျြးမာခမျြးသာ သောကကငျးကွပါစေ…. ကြျောသူ ။” ဆိုပွီး သူ့ရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျလာခဲ့ပါတယျ..။ ကြျောသူက ကိုယျတိုငျ ရရှိခဲ့တဲ့ သငျခနျးစာတှကေို နောငျလာနောငျသားမြိုးဆကျလေးတှကေိုလညျး မမှားယှငျးရအောငျ မြှဝတေငျလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျနျော ပရိသတျကွီး..။ Cele Connections ပရိသတျကွီးလညျး ငယျဘဝရဲ့ သငျခနျးစာတှကေို ယူကာ ကွီးလာတော့ အမြားအကြိုးသယျပိုးတဲ့လူဖွဈအောငျ နထေိုငျခဲ့တဲ့ ကြျောသူကို လေးစားအားကရြငျ မှတျခကျြလေးတှေ ရေးပေးခဲ့ကွပါဦးနျော..။
“မိသားစုထဲမှာတောင် တစ်ယောက်တည်း လူပျိုကြီးဖြစ်နေရတဲ့သူ့ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို ရင်ဖွင့်လာတဲ့ နေမင်း”
သူငယ်ချင်းရည်းစားကို နောက်တစ်ယောက်နဲ့ ပက်ပင်းမိတဲ့ပုံစံကို မျက်လုံးလေးနဲ့သာ သရုပ်ဆောင်ပြသွားတဲ့ နေခြည်ဦးရဲ့ အခွီဗီဒီယို